ETshayina Ngexabiso Elilungileyo le-SG(B) i-10 Series Transformers ye-Wholesale-Shengte abavelisi kunye nabanikezeli |Shengte
Ixabiso Elilungileyo le-SG(B) i-10 Series Distribution Transformers iWholesale-Shengte
Ukongeza kuzo zonke iingenelo zazo zonke iintlobo zoguqulo ezomileyo eTshayina, i-transformer nayo inezi mpawu zilandelayo:
I-Insulation: Ibakala lokugquma yi-H (180 C) kunye nokudityaniswa koyilo kukhulu.
Ukhuseleko: SG (B) 10 series dry-type transformer yenzelwe i-H-class insulation grade, ngelixa i-insulation material engundoqo yi-DuPont NOMEX iphepha lase-United States kunye ne-C-class (ukumelana nokushisa kunokufikelela kwi-220 C).I-transformer ayiyi kuba nedangatye, i-flame-retardant kwaye ayiyi kuqhuma ukukhupha iigesi ezinetyhefu.
Ubume bendalo: Undoqo weTransformer yintsimbi epholileyo eqengqelekayo ye-silicon ene-conductivity ephezulu yemagnethi kunye nomgangatho ophezulu.Ngoyilo olukhethekileyo lweDell, ingxolo yokusebenza ingaphantsi kakhulu komgangatho wesizwe.Inokubuyiselwa emva kobomi benkonzo epheleleyo kwaye ayingcolisi imo engqongileyo.
Ukukhusela ukufuma: Ngenxa ye-NOMEX eshinyeneyo ye-insulated transformer, inokusebenza ngokwanelisayo kwindawo enomswakama kakhulu.Xa ikhoyili iphathwa ngokupheleleyo, inqanaba lokutywinwa lomqhubi kunye namandla omatshini wekhoyili aqiniswa kwakhona ngoxinzelelo lwe-vacuum dipping peyinti ngamaxesha amaninzi.Ngelo xesha, i-antisepsis kunye nokuchasana komswakama we-transformer kuphuculwe.
Ukuqina: Ukugquma kweKlasi yeH kunokumelana nokushisa okusebenzayo kwe-180 C. Inokumelana nokushisa okulungileyo, amandla aphezulu omatshini, iimeko ezintle zokutshatyalaliswa kobushushu, umthamo oqinileyo womthwalo, ubomi obude be-thermal, obungachatshazelwa kukwandiswa kwe-thermal kunye nokunciphisa, ukuqina okulungileyo kunye nokuqina, soze yaqhekeka.
Uqoqosho: Ngenxa yokumelana nokushisa okuphezulu kwenkqubo yokugquma, indawo yokupholisa ye-transformer ingancitshiswa.Xa kuthelekiswa ne-transformer enezinga elifanayo lokugquma, isakhiwo sinokuyilwa ngakumbi kwaye ubunzima bunokuncitshiswa ngokulinganayo.Xa kuthelekiswa nohlobo lwe-09 ye-transformer, i-no-load loss ratio yohlobo lwe-10 ye-transformer iyancipha nge-15% kwaye iindleko zokusebenza ziyancipha kakhulu.
Iiparamitha zobugcisa ze-SC (B) i-10 yohlobo olumileyo lwe-transformer
Umthamo olinganisiweyo (KVA) ilahleko Akukho mthwalo wangoku (%) I-impedance yesekethe emfutshane (%) Inqanaba lesandi DB (A) Ubungakanani beProfayili yeReferensi (mm) Ubunzima bomzimba (kg) Igeyiji (mm)
Akukho mthwalo SG10 Umthwalo 145 C L x W x H ngaphandle kweqokobhe L x W x H ngetyala
I-100 395 1455 1120x1120x1070 1360x1100x1170 720
Ngaphambili: i-oyile-intywiliselwe i-transformer
Okulandelayo: Umboneleli we-OEM ye-10KV yeClass S11 Series kwi-Voltage-Regulated Distribution Transformers-shengte